အစွန့်ပစ်ခံ စက္ကူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အစွန့်ပစ်ခံ စက္ကူများ
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Apr 18, 2015 in Creative Writing, Environment, How To.., Think Different | 31 comments
နယ်ပြန်ပြီး ကြာကြာနေဖြစ်တော့ ပြောစရာတွေ တစ်ပုံကြီး ရလာပြန်ရော။ အိမ်ကအကြောင်းတွေရော၊ မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေရောပေါ့။ အခုက မြို့နဲ့ပတ်သက်တာလေး ပြောချင်တာ။ ကိုယ့်စိတ်ကူးလေးကို တိုင်ပင်ချင်တာကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့။
အိမ်ပြန်တော့ မီးဖိုချောင်ဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ မီးဖိုချောင်ဝင်တိုင်း အဓိက ပြဿနာက မီးဖိုပဲ။ အိမ်မှာက မီးအားသိပ်မကောင်းတော့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေက သိပ်မသုံးမဝင်ဘူး။ မနက်စောစောနဲ့ ညပိုင်းလောက်ပဲ သုံးလို့ရတယ်။ ဒီတော့ အိမ်နားဝန်းကျင်အတော်များများက ထင်းပဲ သုံးကြတယ်။ ကိုယ်က ထင်းနဲ့ မီးမမွှေးတတ်ဘူး။ ထင်းလည်း မဆိုင်တတ်ဘူး။ သမီးယောက်မဆိုင် ဆိုင်ရတယ်တဲ့။ ကန့်လန့်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်။ (ကိုယ်ကတော့ ယောက်မနဲ့ တည့်အောင်နေမှာပါ… အဟိ…) ဘယ်လိုပဲ သင်ပေးသင်ပေး မီးခိုးမွှန်ပြီး ထွက်ပြေးရတာချည်းပဲ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ဟင်းချက်ရင် တစ်ယောက်က မီးထိုးပေးရတယ်။ (အလဲ့.. အဆင့်မြင့်တယ်နော်)။
သစ်ပင်ကို နှမြောတတ်တဲ့သူဆိုတော့ အမေ့ကို မီးသွေးလေးသုံးကြည့်ပါလားလို့ ပြောကြည့်သေးတယ်။ မီးသွေးမီးဖိုဆိုရင် အကုန် ဆက်တိုက်ချက်မှ အဆင်ပြေမှာတဲ့။ သူ့အတွက် အဆင်မပြေဘူးတဲ့။ အခု ထင်းနဲ့ကျတော့ ဘယ်အချိန် ပြန်မွှေးမွှေး အဆင်ပြေတယ်တဲ့။
ထားပါ။ ဒါက အဓိကပြောချင်တာ မဟုတ်သေးဘူး။ အရင်နေ့တွေက အိမ်က ညီမ မီးမွှေးပေးထားတာကို အဆင်သင့်ဝင်ချက်တာဆိုတော့ သေချာမသိဘူး။ ဒီနေ့ကျတော့ အမေမီးမွှေးတာကို ဘေးက ကြည့်နေတာ။ ထင်းတွေကိုဆိုင်၊ စာရွက်ကို မီးရှို့ပြီး အောက်ကထည့်တာ။ ကြည့်လိုက်တော့ ပုံနှိပ်စာအုပ် အဟောင်းတော့်။ အဲဒီစာအုပ်ကို ဟိုရက်ကတော့ တွေ့မိတယ်။ စကားမစပ်မိလို့ မပြောဖြစ်ဘူး။ အခုကျ မေးကြည့်တယ်။ ပုံနှိပ်စာအုပ်အဟောင်းကြီး နှမြောစရာဆိုတော့ မနှမြောလည်း သုံးမယ့်သူမရှိ၊ ဝယ်မယ့်သူ မရှိဘူးတဲ့။ ဘယ်သူမှ စာရွက်အဟောင်း မဝယ်ကြတော့ဘူးတဲ့။ ဂျာနယ်အဟောင်းတွေတောင် တံတားပေါ်ကနေ ပစ်ချမှ ရတော့မယ်တဲ့။ အကုန်လုံးက ပလတ်စတစ်အိတ်တွေ သုံးနေကြတာတဲ့။
အမေပြောမှ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ဟိုနေ့က အိမ်က မောင်လေးကို ငရုတ်သီးဝယ်ခိုင်းတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ စက္ကူအိတ်လေးနဲ့ ရလာမယ်ထင်တာ ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ အရင်ကဆို ကုန်စုံဆိုင်တွေက စက္ကူကန်တော့လေးတွေ၊ စက္ကူထုတ်လေးတွေနဲ့ ပေးကြတာ။ ကိုယ်တောင် စက္ကူကန်တော့ကို သဘောကျလွန်းလို့ အမြဲတမ်း အိမ်မှာ လုပ်ကြည့်တယ်။ နွေရာသီ ကျောင်းတွေ ပိတ်ပြီဆို စာအုပ်တွေအကုန်လုံးကို ထုတ်၊ အဖုံးတွေဖြုတ်၊ စာရွက်အလွတ်တွေကိုဖြဲ (အဖေက အကြမ်းစာအုပ် ပြန်ချုပ်ပေးတယ်)၊ ရေးပြီးသားတွေကို ပြန်ရောင်းပြီး မုန့်ဝယ်စား၊ ပျော်စရာကြီး။ ကုန်စုံဆိုင်တွေက ဝယ်ကြတယ်။ အခုတော့ ပလတ်စတစ်တွေကို ပေါပေါသီသီသုံးလာကြတော့ စာရွက်တွေမှာ အလကားဖြစ်နေတာ နှမြောစရာကြီး။
အဲဒီမှာတင် စိတ်ကူးလေးတစ်ခု ရလာတာ။ ငါသာ ပိုက်ဆံရှိရင် အလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်မယ်။ စက္ကူအဟောင်းတွေပြန်ဝယ်မယ်။ အိတ်တွေလုပ်မယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ အဆင်ပြေပြေ အသင့်သုံးလို့ရမယ့် အိတ်မျိုးပေါ့။ လမ်းဘေးက ကလေးလေးတွေကို ခေါ်ခိုင်းပြီး အလုပ်ပေးမယ်။ ပြီးရင် ပလတ်စတစ်အိတ်ဈေးနှုန်းလောက်နဲ့ ဆိုင်တွေကို ပြန်ရောင်းမယ်။ ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ရမယ့် Non-profit အလုပ်မျိုးပေါ့။ လွယ်တော့ မလွယ်လောက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးလေးကို ပြောကြည့်တာ။ မိုးတွင်းဘက်မှာ ရေစိုမခံပေမယ့် နွေဘက်တွေမှာတော့ ဒီစက္ကူအိတ်လေးတွေကို သုံးဖို့ ပြောမယ်။ မားကတ်တင်းဆင်းမယ်။ ကုန်စုံဆိုင်တွေနဲ့ အထည်ဆိုင်တွေကို အဓိကထားမယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ပြောကြည့်မိတော့ သူလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒါပေမယ့် လွယ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
အဲဒီတော့ လွယ်တာ မလွယ်တာ နောက်ထား။ ရွာထဲမှာတော့ တင်လိုက်ပြီ။ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ၊ ပိုကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးတွေ ရမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်လို့။
စက္ကူက.. ပုံနှိပ်ထားတဲ့စက္ကူဆို.. အထဲမှာခဲဓာတ်ပါတဲ့..မှင်ရှိတတ်တယ်..။ အဲဒါက.. လူကိုဒုက္ခပေး..။
ယူအက်စ်မှာ.. စက္ကူအိပ်တွေသုံးဖို့.. အစိုးရကဖိအားပေးတယ်…။
ပလပ်စတစ်အိပ်တွေကို.. ဘန်းတယ်..။ မြန်မာပြည်မှာလည်းလုပ်တယ်မဟုတ်လား.. ?
ဥပဒေပြုလိုက်တော့.. လူတွေက.. စက္ကူအိပ်ကိုသုံးရရော..
အခုဆို… တခါမကသုံးလို့ရတဲ့.. အ၀တ်စက္ကူအိပ်တွေကို.. အတင်းသုံးခိုင်းနေသဗျ..။
ပစ္စည်းဝယ်၇င်.. ထည့်စရာမပေးတော့တာမို့.. ၀ယ်ရတာလေ…။
အောက်က စက္ကူညိုအိပ်မျိုးဆိုရင်တော့.. အဆင်ပြေမယ်ထင်..။ ကြော်ငြာပါရိုက်ပေးပြီး.. ကြော်ငြာခယူပေါ့..။
ပလတ်စတစ်အိတ်တွေကို ဘန်းတယ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဈေးပေါပေါ ရနေတာတုန်း… ဈေးသည်ဆိုတာ ဈေးပေါလို့သာ ဝယ်သုံးနိုင်တာလေ… အလကားပေးရတဲ့ ပစ္စည်းကိုး.. ဘာဝယ်ဝယ်ကို အတင်းထည့်ပေးနေတော့တာ.. တားကိုယူရတယ်…
အစားအစာမဟုတ်တောင် စက္ကူသုံးလို့​ရမယ့် နေရာတွေ ရှိသေးတယ်… အထည်ဆိုင်တွေ၊ စတိုးဆိုင်တွေ… ဥပဒေထုတ်လား မထုတ်လားတောင် မသိဘူး.. မစိုးမိုးတာတော့ သေချာတယ်…
အနှစ်ချုပ်ရင် စနစ်လို့ ထင်တာပဲ.. အဟိ
ကြုံလို့ပြောရရင်.. မြန်မာပြည်က.. သတင်းစာ..ဂျာနယ်.. ပုံနှိပ်တဲ့မှင်တွေက.. ခဲဓာတ်ပါတယ်လို့.. သေချာပေါက်ပြောရဲတယ်..။
ဈေးပေါပြီး.. စွဲလွယ်တဲ့မှင်တွေသုံးတာကိုး..။ အဲဒါနဲ့တင်.. မြန်မာတွေကင်ဆာဖြစ်နှုန်းတက်မှာပေါ့..။
ယူအက်စ်မှာကျ.. ပုံနှိပ်မှင်တွေကို.. စားလို့ရတဲ့ Soybean အခြေခံမှင် ကို ဥပဒေအရသုံးရသဗျ…။
ဆိုကော့.. ကျုပ်ရဲ့မြန်မာ့ဂဇက်သတင်းစာကမှင်ဆိုရင်.. လျှာနဲ့လျှက်စားလို့ရတယ်.. လို့..။
About one quarter of commercial printers in the United States now use soy ink. … The center created the SoySeal mark used to identify products meeting basic … Color newspaper inks are more competitive to petroleum-based inks as well.
.အဲဒါ လောလောဆယ် တိုင်းပြည့်အတွက် တကယ့်အရေးကြီးဆုံး လက်တွေ့အကျဆုံး အလုပ်လို့ အမမြင်တယ်။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကို ဆိုက်သေး ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် ထာဝရ ပိတ်သင့်ပါတယ်။ ခုတော့ ငရုတ်သီးစိမ်းလေး ၁၀၀ ဘိုးဝယ်ရင်တောင် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးနဲ့။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ဆိုက်သေး ထုတ်လုပ်ခွင့် ပိတ်သိမ်းလိုက်ရင် လူတွေ ဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။ တစ်ခုခုနဲ့ အစားထိုးသုံးလိမ့်မယ်။ လက်ဖက်ရည်ဝယ်ရင် သူတို့ဖာသာ ဂျို င့် ယူသွားလိမ့်မယ်။
ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ပိတ်သိမ်းရင် အခု ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ မြောင်းပိတ်ပြသနာ၊ ရေကြီးရေလျှံ ပြသနာ ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ ပြီးတော့ ကင်ဆာ နဲ့ပတ်သက်လို့ အမ သေချာ မသိပေမယ့် မရှင်းလင်းတဲ့အချက်ရှိတယ်။ ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖတ်ရတာက ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ထဲကို အပူ (ဥပမာ မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်) ထည့်လိုက်ရင် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုဆိုးထားတဲ့ ဆေးရောင်ကြောင့် လူကို ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကို အဖြူ ရောင်တွေ ထုတ်ကြတယ်။ အဲဒီအဖြူ ရောင်ကရော အရောင်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အကြည်တွေက ပျော့လို့ သုံးလို့ မကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့် ပုံမှားရိုက်ပြီး သုံးကြသလို ဖြစ်နေတယ်။ ကာလာမပါတဲ့ အိတ်နဲ့ ထည့်ရင် ရောဂါ မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောနေကြတယ်။ တကယ်က အဖြူ ရောင်ကာလာ ပါနေတာပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြို့တိုင်းမှာ မြင်မကောင်းအောင် ပွထနေတာ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကြောင့်ပဲ။ မြန်မာလူမျိုး ဆိုတာက ခပ်လွယ်လွယ် သိပ်သုံးတာ။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်သုံးစရာမလိုလဲ သုံးကြတာပဲ။ မြို့တိုင်းမှာ မြောင်းပိတ်တာ၊ ရေလျှံတာက ဖြစ်နေတာ။ ဒါကြောင့် ကျွတ်ကျွတ်အိတ် အိတ်သေး သုံးစွဲတာ ပိတ်လိုက်ရင် (၁) မြို့ တွင်းမြောင်းပိတ်ပြီး ရေလျှံတဲ့ကိစ္စရယ် (၂) ကင်ဆာလို ကိစ္စမျိုး ရယ်မှာ သက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာ ရှိမယ်လို့ ယုံပါတယ်။
ဟုတ်တယ် အစ်မ.. စီးပွားရေးသမားတွေက နားလှည့်ပါးရိုက် လုပ်နေကြတာ… ပြည်သူတွေကလည်း သုံးရလွယ်ပြီးရော ဆိုပြီး ဘာမှ မစဉ်းစားဘဲ ပေါပေါပဲပဲသုံးနေကြတယ်.. အစိုးရကလည်း ဘာထိရောက်တဲ့ ဥပဒေမှ ထုတ်မပေးဘူး… နယ်တွေမှာ ပိုဆိုးနေတယ်…
ပလပ်စတစ်ကိုယ်နှိုက်ကိုက.. အပူချိန်တခုနဲ့တွေ့ရင်.. ကမ်မစ်ကယ်ထွက်ပြီး.. ကင်ဆာဖြစ်စေပါတယ်…။
ပလပ်စတစ်ဗုးနဲ့.. မိုက်ကရိုဝေ့ထဲ အစားအသောက်နွှေးရင်လည်း.. ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တာပါပဲ..။
ယုတ်စွ.. ကားထဲသောက်ရေသန့်ဗူးတောင်.. အပူချိန်တခုမှာ..တရက်ထားရင်.. ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ထွက်တာမို့.. ပေးမသောက်ပါ…။
Nikhil Gangadhar, Bangalore, Oct 28, 2013
It is understood that most food or beverages sold in restaurants or stalls contain trace quantities of contaminants, but in the case of the piping hot cups of tea purchased from roadside vendors in the City, the drink may actually be bad for you.
A series of investigations by Deccan Herald have shown that much of this tea is not transported in thermos flasks, as expected, but are actually stored in thin, low-quality packets of plastic. Not only does this practice suggest that the government’s awareness drive on the ill-effects of using plastic has seen little success, but according to medical practitioners, the food itself is frequently contaminated by chemicals found in the packets.
Speaking on the condition of anonymity,adoctor fromagovernment hospital said that plastic bags are not only harmful to the environment but also to people. “There are various chemicals disseminated from plastic bags like polyvinyl chloride, polyethylene and polystyrene and consuming food orahot drink from plastic packets leads to various complications in the human body,” he said.
Another medical practitioner, cardiovascular specialist, Sanjay Mehrotra, revealed that the average person in the City already has around two to three grams of plastic in their body. “In one way or other we are consuming plastic through our food,” he said. “People are not aware of the harmful affects of consuming food stored or carried inaplastic container or packet.”
Jamal,atea-shop owner in Shivajinagar, admitted that the practice of storing tea in packets has become established for some time now. “Earlier, we used to sell tea in small plastic cups but that was not cost-effective,” he said. “We found plastic packets to be much more economical. This is the best way we can parcel the tea.”
Another Shivajinagar tea vendor, who did not wish to be named, brushed aside suggestions that it was harmful to use store food in plastic containers. “There is nothing wrong in consuming tea which is carried inaplastic packet, as it is carried only forashort distance, after which we transfer it intoanormal cup,” he said.
The government doctor, however, took exception this claim. “The number of people suffering from kidney and throat ailments, cancer and infertility has been increasing in the City,” he said. “The rise in such cases is attributed largely to people eating hot food items carried in plastic bags or boxes — as they are of low quality. Whenever hot food or liquid is packed inaplastic bag there is an exchange of toxic chemicals into the food. Those chemicals include styrene and bisphenol and may lead to cancer, heart diseases and other reproductive problems.” A hotelier said certain restaurants insist that customers carryanon-plastic container for parcel items, but admitted that most restaurants still use plastic boxes, covers and cups unsuited for steaming food as it may lead to food poisoning.
If the Chemicals Are So Risky, Why… continued…
The NTP advice to consumers was hard to decode. “There was nothing in our report that should cause alarm…but at the same time, people should make their own decision about which precautions they want to take,” says Michael Shelby, Ph.D., director of the NTP’s Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction. “The science is just not definitive.”
ဟုတ်ပါတယ် သဂျီး။ ပလတ်စတစ်ကိုယ်နှိုက်ကိုက ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျာနယ်ထဲမှာ ရေးတာ ဒီလို မဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်တုန်းက ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ပိတ်သိမ်းဖို့ ဆိုပြီး ဥပဒေလုပ်မလို့ ထွက်လာကြသေးတယ်။ ဘာမှ မကြာဘူး။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်မှာ ပါတဲ့ ကာလာကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်တာပါ- ဒါကြောင့် ကာလာ မပါတာ သုံးခွင့်ရှိပါတယ် ဆိုပြီး လိုရာကိုရောက်အောင် လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်က ကာကွယ်လိုက်တာပါ။ အဲဒါဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အကြည်နဲ့ အဖြူ တွေ အများစု ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ် လာခဲ့တယ်။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လုပ်ငန်းရှင်ဘက်က ကာကွယ်ပေးလိုက်တာပါ။ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ။
ပြုံးမမ ကိုထောက်ခံပါတယ်။ပလပ်စတစ်ကိုယ်၌က ကင်ဆာဖြစ်စေတာကို ဆေးရောင်ကြောင့်လိုလို ဖြစ်အောင် လှည့်စားပြီး ဆက်ထုတ်ခွင့်ပြုလိုက်တာ ။
အဲ့သဟာဆိုရင်​ ပြတ်​သနာပဲ သူဂျီး ကျ​နော်​တို့ အရင်​က လုံခြုံ​ရေးထွက်​ရရင်​ လူသူမနီးတဲ့ ​နေရာ​တွေမှာဆို ကျွတ်​ကျွတ်​အိတ်​ထဲ​ရေထည့်​ မီးဖို​ဘေးမှာတိုင်​​လေးနှစ်​တိုင်​စိုက်​ ထိပ်​ကတန်း​လေးပစ်​ပြီး​စော​စောက​ရေထည့်​ထားတဲ့ကျွတ်​ကျွတ်​အိတ်​ကိုချိတ်​ ​အောက်​ကမီးထိုးပြီး​ရေ​နွေးတည်​​သောက်​ကြသဗျ ။ ​ရေစိမ်း​သောက်​ရင်​ ငှက်​ဖျား​ကြောက်​ရလို့​လေ ။ တစ်​ခါတစ်​​လေများ လက်​ဖက်​​ခြောက်​​တောင်​ထည့်​ပြီးမှ ​ရေ​နွေးတည်​သဗျာ ။ ​ရေလည်းအပွက်​ လက်​ဖက်​​ခြောက်​လဲအကျ အို​ကေပဲ
ရေစိမ်းသောက်ရင် ငှက်ဖျားဖြစ်မှာ ကြောက်ခဲ့သေးတယ်ပေါ့။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မင်းသား စမ်းရေတွေသောက် ငှက်ဖျားထ၊အဲသလို ပြတာတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေပေါ့။
တစ်ချို့ဈေးသည်တွေက ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကို မသုံးချင်ကြပါဘူး ဒါပေမယ့်လည်း ဈေးဝယ်တွေက ဈေးဝယ်လာရင် လက်ဗလာနဲ့လာကြပြီး ဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ ထည့်ခိုင်းတယ်။ တာဝန်ရှိသူများက ကြွပ်ကြွပ်အိတ်မသုံးရဆိုတဲ့ အမိန့်ဥပဒေထုတ်ရင် သူ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်မဲ့ အခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုကို လမ်းညွှန်သင့် ထုတ်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အခုတော့ အုပဒေသာထုတ်ပြန် အသက်ဝင်မှုရှိအောင် ဘာမှမဆောင်ရွက် သူ့နေရာမှာ အစားထိုးအသုံးပြုမဲ့ ပစ္စည်းကိုလည်း မညွှန်ကြား မထုတ်လုပ်ပေးနိုင် ဒီတော့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကတော့ အောင်ပွဲခံလျှက်ပါပဲ။ စက္ကူအိတ်လေးတွေထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးက ကောင်းပါတယ် သုံးပီးသား စက္ကူတွေကို ပြန်အသုံးပြုမှာဆိုတော့ အားပေးပါတယ် လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုလို့တော့ မြင်မိတာပါပဲ ကျန်တဲ့အပိုင်းတော့ သိပ်မသိ ကိုယ်ကလည်း စီးပွားရေးသမားမှမဟုတ်တာလေ
စီးပွားဖြစ်တော့ လုပ်လို့ရမယ် မထင်ဘူး.. အိတ်စိုက်ပြီးလုပ်ဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတာ..
သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးလို့ ရတဲ့ စက္ကူချည်းပါပဲ။
ဒီမှာတော့ ဆိုင်တွေက ကျွတ်ကျွတ်အိတ် မပေးတော့ဘူး။
အဝတ် အိတ် ဝယ်ရတယ်။
ကိုယ်က အိတ်မပါတော့ ဝယ်ခဲ့ရတာချည်းပဲ။
ခုတော့ ဈေးသွားရင် တွန်းလှည်းပဲ ယူသွားတော့တယ်။။
ပြောသာပြောရ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဒီမှာလည်းမလွယ်သေးပါဘူးးးး
တစ်နိုင်တော့ လုပ်ကြည့်စေချင်ပေမဲ့ ကောင်းတာလုပ်ရင် အပြစ်ဖြစ်နေသေးတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ မပြောရဲဘူးး
မတော်.. ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ပိတ်လိုက်လို့ ဆန္ဒပြနေမှဖြင့်..
.အ၀တ်အထည်တွေကို စက္ကူနဲ့လိပ်ပြီး ပေးတယ်
.ကုန်ခြောက်ပစ္စည်းတွေကို ဖက်ကြမ်း(အင်ဖက်လိုမျိုး) နဲ့ထုပ်ပေးတယ်….
.လက်နဲ့ကိုင်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ထုပ်မပေးပဲ ဒီအတိုင်းကိုင်ရတယ်..
.လက်နဲ့ကိုင်ဖို့ခက်ရင် ကြိုးနဲ့ (ဥပမာသင်အူကြိုး ဂုံနီကြိုး) ချည်ပြီး ဆွဲရတယ်။
.ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကို ဖယ်ရင် ဈေးဝယ်တဲ့စတိုင်တော့ ပြောင်းရမယ်
.ဥပမာ လဘက်ရည် ပါဆယ်ဆွဲဖို့ မသင့်တော့ဘူး
.မုန့်ဟင်းခါးဆို ချိုင့်နဲ့မှ ၀ယ်လို့ဖြစ်မယ်…..
.လတ်တလော ထည့်စရာ ကိုင်စရာ အဆင်ပြေဖို့
.နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် ဒုက္ခပေါင်းစုံကို ဖန်တီးပြီး မရင်း သင့်ပါဘူး..
လက်ဖက်ရည်နဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို ချိုင့်နဲ့ ပြန်ဝယ်ကြရင် ထွေပြားနေတဲ့ ရောဂါတွေ တ၀က်လောက် သက်သာသွားလိမ့်မယ် ဦးပါရေ။
ပလတ်စတစ်နဲ့ အချိုမှုန့်ဟာ… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက အန္တရာယ်လို့ မြင်ပါတယ်…
ငယ်ငယ်က အဖေ့ကုန်စုံဆိုင်အတွက် ညညဆိုရင် စက္ကူအိတ်တွေ ကပ်ရတယ်။
မုန့်ဝယ်ရင် ဗန်ဒါရွက်၊တောင်စွန်ဖက်၊ငှက်ပျောရွက်၊ကြာရွက်တွေ သုံးကြတယ်။
အခု လွယ်ကူဈေးပေါတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်က အားလုံးကို အလဲထိုးသွားပြီ။
မလွယ်အောင် ဈေးမပေါအောင်( အရက်၊စီးကရက်ကို အခွန် ကြီးကြီးချသလို လုပ်ရမယ်) အစိုးရက ကန့်သတ်မှရမယ်။
လူထု အသိစိတ်နဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ မရပါ။
ဂျာနယ်အဟောင်းကို စက္ကူအိတ်လေးတွေ ကပ်ပြီး လက်ဆွဲကြိုးလေးနဲ့ ရောင်းတာ တွေ့ဖူးတယ်။
ဓမ္မစေတီလမ်းပေါ်က Coffee Circle ဘေးဆိုင်မှာ အော်ဂဲနစ်အသီးအနှံတွေဝယ်ရင် အဲလိုစက္ကူအိတ်နဲ့ ထည့်ပေးတယ်တဲ့။
ဒါလည်း အားပေးသူရှိမှ ဆက်လက် ရှင်သန်မယ်။
အစိုးရက အဲဒီလို လုပ်ငန်းတွေကို Subsidize ပေးရပါမယ်။
အော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုလည်း ရှင်သန်စေချင်လို့ ဈေးကြီးပေမယ့် တွေ့တိုင်းအားပေးနေပါတယ်။
ကန်တော်ကြီး ဂျပန်သံရုံးရှေ့မှာ Go green ဆိုင်ရှိပါတယ်။အားပေးကြပါ။
အခု ဆို ရွှေပြည်ထဲ သတင်းစာ တွေ ကဝယ်သူတောင် မရှိသလောက် ရှားနေလားမသိ။
အရီး ကတော့ ဒီမှာ ဈေးဝယ် တဲ့ ခရက်ဒစ်ကဒ် နံပါတ် တစ်စွန်းတစ်စပါ ဘောက်ချာ တွေ ကို ဒီ အတိုင်း မပစ်ချင်လို့ ရေ နဲ့ နူး ထားလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ အလုံး လေး တွေ လုံးပြီး အခြောက်ခံ ထား တယ်။
ဒီမှာတော့ ဟင်းချက်ဖို့ သုံးဖို့ မလိုပေမဲ့ နိုဝင်ဘာထဲက မီးပုံပွဲည မှာ မီးရှို့ပီး မီးပုံလုပ်လိုက်တယ်။
ခံလဲ ခံ တယ်။ ထင်းလဲ မကုန်တာမို့ ပါတ်ဝန်းကျင်လဲ ထိန်းရာရောက် တယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်နိုင်ဘဲ ရမယ်။ စီးပွါးဖြစ်ကတော့ မဖြစ်လောက်ဘူး။
ကျွတ်ကျွတ်အိတ် တွေ ကို တော့ ဒီမှာ ဘုံးဘောလအော မသုံးရအောင် ပိုက်ဆံ နဲ့ ရောင်းဖို့ ဥပဒေပြုထားပြီ။
ဒီတော့ လူတွေ က ကိုယ့်ဟာ ကို အိတ် တွေ ယူလာပြီး ထည့် ကြတော့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် အမှိုက် တွေ နဲ သွားတယ်။
ဒီမှာ လူတော်တော်များများ က ရေရှည်ခံ တဲ့ လျှော်အိတ် တွေ (ကြံဖတ် ကနေ လုပ်တာ) ကို သုံးလာကြပြီ။
ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လုပ်ငန်း ဘက် က ကြည့်ရင် ထိခိုက်ပေမဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု အားကောင်းလာတာပေါ့။
မုန့်ဟင်းခါး၊ လက်ဘက်ရည် ဝယ် ရင် ချိုင့်ယူပြီး ဝယ် ရင် ပိုပြီး တောင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီ သေး ပေါ့
မန်းလေးဈေးချိုကြီးမဖျက်ခင်ကJ ရုံထဲဈေရောင်းသင်တုန်းကဈေးဝယ်မရှိချိန်ဆို
အခုတော့အလွယ်တကုကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ
အဲကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုမသုံးရဆိုပြီးတနိုင်ငံလုံးတားတာသုံးနှစ်လောက်ရှိပြီ
ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုပိတ်တယ်အဲအချိန်ကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကအရောင်နဲ့
ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုအဖြူရောင်နဲ့ထုတ်ပြီးရောင်းခဲ့တာအခုချိန်ထိ
ပလတ်​စတစ်​အိတ်​က ငါးကိုအိတ်​ အခု ၆၀ ​လောက်​ ပါတာကို ​ငွေ ၁၀၀ ကျပ်​ပဲ​ပေးရတယ်​ဆို​တော့ ​ဈေးသည်​​တွေ ​ပေါ​ပေါသီသီသုံး​နေကြတာ​ပေါ့… စက်​ရုံ​တွေကို အခွန်​အများကြီး​ကောက်တာတို့.. ဥပ​ဒေထုတ်​ ပိတ်​ခိုင်းတာတို့ လုပ်​ရမှာ…
​ပြောခဲ့တာ ကြားခဲ့တာ ကြာပြီ
ရုပ်​မြင်​သံကြားက​နေ လွှင့်​ခဲ့တာလည်း အလွတ်​​တောင်​ရလုလုပဲ
မန်းမှာလည်း ကျွတ်​ကျွတ်​အိတ်​ ကင်းစင်​နယ်​​မြေ ဘာညာ လုပ်​လိုက်​​သေး
​နောက်​ဆုံး အရှိန်​​သေသွား​တော့ ဒုံရင်းကဒုံရင်းပါပဲ
စက္ကူအိတ်​​​နဲ့ ထည့်ပေးတာ လူထုတိုက်​ပဲ မြင်​မိသေးတယ်
ကိုယ်​တိုင်တော့ မလိုရင် အိတ် မယူဖြစ်​ဘူး
အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲ နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် လျော့အောင်​လုပ်နေတယ်​လို့
(စက္ကူအိတ်​ကို ဖက်​ရှင်​တစ်​ခုအ​နေနဲ့ ​ပေါက်​​အောင်​လုပ်​ရင်​​တော့ အ​တော်​​အောင်​မြင်​မယ်​ ဘာလို့လဲဆို​တော့ ခု​နောက်​ပိုင်းမှာ ​ပေါ်ပင်​လိုက်​တာ​တွေ အရမ်းကို များလာလို့)
ငယ်ငယ်တုန်းက စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက စက္ကူအိတ်လေးတွေနဲ့ပဲထည့်ပေးတာ။ အသေး အလတ် အကြီး စုံလို့ပဲ။ ဂျာနယ် သတင်းစာတွေကို အိတ်လုပ်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ညှပ် ကိုယ်တိုင်အိတ်လုပ်ခဲ့တာ သတိရတယ်။ ခုလည်း အိမ်ကအစ်မကို အိကျီ င်္တို့ ဘာတို့ သူများကို ထည့်ပေးဖို့ စက္ကူအိတ်လေးတွေ လုပ်ပေးဖြစ်တုန်း။
အခါခါ ထည့်သုံးချင်လို့ သူကြီး ပြထားတဲ့ပုံထဲကလို အဝတ်စက္ကူ အိတ်လေးတွေဝယ်ပြီး သုံးမယ်လို့…
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ့်တစ်ကိုယ်စာ အထောက်အကူပေးမယ်လို့..တွေးပြီး..
တစ်အိတ် ၂၀၀၀ ကျော် ဆိုတဲ့ ဈေးနှုန်းကြောင့်…….
ထမင်းနှစ်နပ်လောက် လျှော့စားပြီးမှ ဝယ်နိုင်မှာမို့….
စက္ကူကအလကားနီးပါးလောက်ရနေတာမို့ စက္ကူအိတ် သုံးလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာသုံးအောင် ကမ်ပိန်းလုပ်ကြဖို့ကောင်းတယ်။
မလတ်ပြောသလို စက္ကူကို ရေစိမ်လုံးခြေပြီး အခြောက်လှမ်းပြီး ထင်းရူးစအစားထိုး မီးမွှေးတဲ့နေရာမှာ သုံးနိုင်တယ်။
စက္ကူအတိုင်းမီးရှို့တာက မီးခိုးမှိုင်းများလို့ လေထုညစ်ညမ်းစေသလားလို့။
.“သစ်ပင်ကို နှမြောတတ်တဲ့သူဆိုတော့ အမေ့ကို မီးသွေးလေးသုံးကြည့်ပါလားလို့ ပြောကြည့်သေးတယ်။”
မီးသွေးက ထင်းထက်စာရင် သက်သာဦးမလားလို့..
နယ်မှာက ဂက်စ်က သိပ်မပေါသေးဘူး…အမေ့ကိုတော့ ဂက်စ်သုံးဖို့ စည်းရုံးရေးဆင်းရမယ်..
ဒီမှာတော့ ဈေးဝယ်ရင် ကိုယ့်အဝတ်အိတ်နဲ့ကိုယ်သွားပဲ…
အိတ်မပါလို့ ပလပ်စတစ်အိတ်တောင်းရင် တစ်အိတ် ပြား-၅၀ ပေးရတယ်…
အစိုးရက ဥပဒေထုတ်ပြီး ပလပ်စတစ်အိတ် လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ရှယ် အခွန်ကောက်တယ်…
စတိုးဆိုင်ကြီးတွေကတော့ စက္ကူအိတ်ပဲ ပေးတော့တာ ကြာပေါ့…
-ကျွတ်ကျွတ်အိတ် မသုံးဖို့ ကန်ပိန်းလုပ်ရင်တောင်..စူပါမားကတ်တွေလောက်ဘဲ ဖစ်နိုင်သေးတယ်
-ဈေးပိစိလေးတွေမှာ..ကျွတ်ကျွတ်အိတ်က မရှိမဖစ်..ပစ္စည်းဘဲ..ဈေးခြင်းပါတဲ့လူက ပြသနာမရှိပေမဲ့
-လက်ဗလာနဲ့ လာကျတဲ့ သများတို့လို့ လူဒေက ပိုများနေတော့….recycle bag မရောင်းနိုင်တဲ့ တူတူ
-စက္ကူအိတ်ထိုင်လုပ်နေဖို့ အချိန်မရမဲ့တူတူ…ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ရှိမှ ပြည့်စုံတယ်..လို့ဘဲ ပြောရတော့မယ်
-လောလောဆယ် အခြေအနေမှာ လုပ်နိုင်တာ..တစ်ခုဘဲရှိတယ်…
-အမှိုက်ကောက် ကန်ပိန်းလေ..ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အဓိက ထားပြီးကောက်..ပီးရင် မီးရှို့..
-အိုက်လိုဆို ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းတာအတော်လေး သက်သာမယ် (အထင်) ..
ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ရဲ့ စွန့်ပစ် ဒုက္ခ က အာ့လေ..
မီးးရှို့ရင် လေထု ညစ်ညမ်းးကိန်းသာ မြင့်ပြီးး ပြာမဖြစ်ဘူးးး
ပုံပြောင်းး ရီဆိုင်ကယ် လုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူးးး
Market Place မှာတော့ shopping bag ပါရင် စောင့်စရာမလိုဘူး.. ချက်ချင်းရှင်းလို့ရတယ်တဲ့… နိုင်ငံခြားသားတွေက counter မှာ မစောင့်ချင်ကြတော့ shopping bag တွေ ယူလာတယ်.. မပါရင်လည်း ဝယ်ကြတယ်.. အနော်တို့ ရွှေများကတော့ လက်ဗလာနဲ့ လာကြလေတော့ ဟိုဘက်ကောင်တာတွေမှာ တန်းစီစောင့်နေကြတယ်ပေါ့…